Silicone fingotra - Changzhou longxin milina Co., Ltd
Silicone fingotra dia fingotra rojo izay lehibe indrindra dia ahitana ny silisiôma sy ny oksizenina ataoma mifandimby, ary misy antoko-mpitory matetika organika roa mifandray amin'ny silisiôma ataoma. Manana mari-pana ambany tsara fanoherana sy mbola afaka miasa amin'ny -55 ℃.
Misy fomba maro ny classifying silicone fingotra. Araka ny endrika alohan'ny nanasitrana, dia azo zaraina ho Room hafanana vulcanized silicone fingotra, ny hafanana avo vulcanized silicone fingotra. Araka ny monomer ampiasaina, dia azo zaraina ho methyl vinyl silicone fingotra, methyl phenyl vinyl silicone fingotra, fluorosilicone, nitrile silicone fingotra sy ny sisa. Ary araka ny fahasamihafana eo amin'ny fahombiazana sy ny fampiasana, dia azo zaraina ho karazana ankapobeny, ny hafanana faran'izay ambany mahatohitra karazana, faran'izay ambony karazana mahatohitra ny hafanana, hery avo karazana, mahatohitra karazana menaka, karazana fitsaboana sy ny sisa.
Fahazoan-dalana hidirana ny fitaovana ho an'ny famokarana makiazy: LXQLF Series Multi-asa Triple Shaft Mixer, LXQLFQ Series Enhanced Multi-asa Triple Shaft Mixer, LXXJB andian-dahatsoratra planeta Mixer, LXDLH Series hery planeta Mixer,